SIDA LOO SAHLO HABKA ULTIMATE PERFORMANCE (POWER) EE WINDOWS 10 - JILICSAN
Sida loo sahlo habka Ultimate Performance (Power) ee Windows 10
Iyadoo Windows 10 Nooca 1803 Microsoft waxay soo bandhigtay qorshe koronto oo cusub Habka awoodda wax qabad ee ugu dambeeya , kaas oo si gaar ah loogu talagalay Workstation-yada oo ujeedadiisu tahay in la hagaajiyo waxqabadka nidaamka hawlgalka iyo in la gaaro waxqabadka ugu sarreeya ee Windows 10. Sida laga soo xigtay Microsoft. Qaabka Waxqabadka Windows Ultimate waxaa si gaar ah loogu talagalay mashiinnada culeyska culus ee aan awoodin in ay hoos u dhigaan waxqabadka inta lagu jiro farsamaynta culeyska shaqada ee ballaaran.
Siyaasaddan cusubi waxay ku dhismaysaa siyaasadda wax-qabadka sare ee hadda jirta, waxayna qaadaysaa tallaabo dheeraad ah oo lagu baabi'inayo micro-latencies ee la xidhiidha farsamooyinka maaraynta awoodda wanaagsan. Maaddaama nidaamka korontadu uu ku wajahan yahay hoos u dhigida latencies-yar, waxay si toos ah u saameyn kartaa qalabka oo ay isticmaasho awood ka badan qorshaha dheellitiran ee caadiga ah.
Waa maxay qaabka ugu dambeeya ee Windows 10?
Sida magacu soo jeediyo, sifadan waxa si gaar ah loogu talagalay isticmaalayaasha horumarsan kuwaas oo Waxqabadka Sare aanu ku filnayn. Waxay ka caawisaa in ay dedejiso wax yaabaha iyada oo meesha ka saaraysa micro-latencies ee la socda farsamooyinka maaraynta awoodda fiiqan - halkii aad ka fekeri lahayd awoodda, goobta shaqadu waxay diiradda saari doontaa xitaa wax badan oo ku saabsan waxqabadka.
Microsoft waxay u abuurtay Habka Waxqabadka ugu sarreeya gudaha Windows 10 PC-yada dhamaadka-sare oo kaliya waxayna ujeedadeedu tahay inay sare u qaaddo waxqabadka nidaamka qalliinka. Waxay keeni kartaa biyo-baxa batteriga xad-dhaaf ah haddii lagu rakibo qalabka ku salaysan baytariyada.
Daar qaabka ugu dambeeya ee waxqabadka Windows 10
Nasiib darrose, Microsoft uma oggolaanayso tan nidaamyada ku shaqeeya baytariga, shirkadduna waxay ku xidhay astaantan Windows 10 Pro for Workstations. Iyo dadka isticmaala guriga, Muuqaalkan si toos ah ayaa u qarsoon si aadan kaliya uga dooran karin Xulashada Awoodda, ama ka soo jiidashada batteriga gudaha Windows 10. Laakin adigoo isticmaalaya Command Prompt tweak waxaad ku qasbi kartaa Habka wax qabad ee ugu dambeeya waxayna ku shaqayn doontaa daabacaad kasta oo Windows 10 ah iyada oo aan loo eegin qaabaynta qalabka.
Muhiim: Nidaamkan maaraynta korantada waxa kaliya oo laga heli karaa Windows 10 nooca 1803 iyo wixii ka sareeya. Si aad u ogaato nooca nidaamkaaga, geli guulayste amarka ku jira liiska bilowga, taabo Gelida, oo akhri macluumaadka ku jira sanduuqa wada hadalka.
Windows 10 Dhis 17134.137
Marka hore guji raadinta menu bilowga.
Ku qor PowerShell weydii, dooro natiijada ugu sareysa, midig-guji oo dooro Run as administration.
Ku qor amarka soo socda awood daaqadaha ugu dambeeya qaabka wax qabad gudaha guddiga kontoroolka oo tabo Gelida:
Hadda taabo Windows + R, ku qor Powercfg.cpl Guji ok si aad u furto Power Options. Halkan hoostooda Qalabka iyo Codka iyo xulashada Waxqabadka ugu dambeeya . Sida siyaasadaha kale ee awooda Windows, waxaad awoodi doontaa inaad habayn karto siyaasada Waxqabad ee ugu dambeeya si loo daboolo baahiyahaaga shaqsiyeed.
Fiiro gaar ah: Siyaasadda awoodda wax qabad ee ugu dambeysa hadda lama heli karo marka uu ku shaqaynayo aaladda batteriga Tusaalooyinka Laabtoobyada.
Habbee Qorshaha Awooda Waxqabadka Ugu Dambeeya
Waxa kale oo aad u habeyn kartaa qorshaha awoodda waxqabadka ugu dambeeya sida qorshooyinka tamarta kale. Si tan loo sameeyo guji isku xirka Beddel habaynta qorshaha ee ku dheggan Performance Ultimate si aad u gasho daaqadda Dejinta Qorshaha Wax ka beddelka.
Riix hoos-hoosaadka On batteriga u dhaw Demi bandhigga oo ka dooro wakhti ku habboon liiska. Deji xilliga la doortay kadib bandhiggu wuxuu si toos ah u dami doonaa oo u wareegi doonaa shaashadda gelitaanka. Si la mid ah, ku dhufo meesha hoos timaada Ku xidhan oo dooro wakhti ku haboon shaashadu inay damiso.
Sidoo kale, Guji goobaha korantada ee horumarsan si aad u weynayso saaxirka si aad ugu habayso qiimaha aad rabto. Si sax ah u sax door kasta oo habayso oo samee isbeddello la door bidayo.
Iyo wakhti kasta Haddii aad rabto inaad codsato ikhtiyaarka Qorshaha Awoodda Waxqabadka ugu sarreeya sida aad hesho ka dib rakibidda ka dibna dhagsii Soo celi dejinta qorshahan . Guji haa marka pop-up ku waydiinayo Ma hubtaa inaad doonayso inaad soo celiso qorshahan habayntiisa caadiga ah?
Dami Qaabka Waxqabadka ugu dambeeya ee Windows 10
Haddi wakhti kasta aad go'aansatid inaad joojiso qaabka waxqabadka Ultimate. Kaliya u gudub daaqada fursadaha awooda (Riix Windows + R, nooca Powercfg.cpl guji ok) oo dooro badhanka Raadiyaha oo dheellitiran. Hadda ku dhufo 'Beddel habaynta qorshaha isku xirka ku xiga Performance Ultimate, oo guji ikhtiyaarka tirtirka.
Taasi waa wax walba oo ku saabsan Windows 10 qaabka waxqabadka (awoodda) kama dambaysta ah, Miyaad karti u siisay doorashadan Nidaamkaaga? nala socodsii faallooyinka hoose Sidoo kale akhri Windows 10 Abriil 2018 Cusbooneysii Astaamaha Qarsoon ee laga yaabo inaadan garanayn (Nooca 1803).